“Androm-bavaka maneran-tany 2018” : mifanandrify amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena | NewsMada
“Androm-bavaka maneran-tany 2018” : mifanandrify amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena
Hotanterahina ny alahadin’ny Pentekosta 20 mey 2018 ho avy izao amin’ny 2 ora sy sasany ao Antsahamanitra ny Androm-bavaka maneran-tany na ny Global day of prayer (GDOP) eto Madagasikara. Mikarakara izany ny Fikambanana mampiely Baiboly malagasy (FMBM) sy ny Fikambanan’ny mpiara-mamaky ny Baiboly (FMMB), iarahana amin’ireo fiangonana sy fikambanana kristianina maro samihafa.
Iombonan’ny firenena maherin’ny 240 manerana izao tontolo izao io fotoana io, hivavaka ho an’ny tanindrazana, araka ny voalazan’ny Soratra Masina : “Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny ” ( 2 Tantara 7.14).
Mifanandrify indrindra amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena io fotoana io ka hanaingana ny Malagasy tsirairay hivavaka ho fanasitranana ny tany. Samy tompon’andraikitra amin’ny fahapotehana eo amin’ny tontolo misy azy ny tsirairay, koa entanina mba hiverina amin’ny fampanjakana ny fahamarinana sy ny fandriampahalemana eo amin’ny misy azy : fanabeazana, fahasalamana, toekarena, tontolo iainana, sns … Nomen’Andriamanitra io « Androm-bavaka maneran-tany » io hisarihana ny rehetra hiaina ireo soatoavina voizin’ny Soratra Masina, hanantenantsika fanasitranana marina ho an’ny firenena.
Mampiavaka io fotoana io amin’ity taona ity ny fandraisan’anjaran’ny tanora amin’ny alalan’ny « flashmob », vavaka am-pandehanana hatao ny 5 sy 19 mey 2018. Toerana telo samihafa ny fiaingana: Ankatso, Andohalo, Ampasika, ary eo Mahamasina ny fahatongavana.